May 2, 2020 - UpdateNew
ပန်းသီးစားရင် သတိထားရမဲ့ အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်ပြီး လူကိုသေစေနိုင်သောအချက်.
May 2, 2020 UpdateNew 0
ပန်းသီးစားရင် သတိထားရမဲ့ အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်ပြီး လူကိုသေစေနိုင်သောအချက် ကျန်းမာရေး စစ်တမ်းအရ တစ်ကမ္ဘာလုံး ခြုံကြည့်လိုက်ရင် နှစ်စဉ် လူဦးရေ ငါးသောင်း ခန့်ဟာ ပန်းသီး အစေ့ကို စားသုံးမိလို့ သေဆုံးနေပါတယ်။ (ပန်းသီးရဲ့ အစေ့ကို စားသုံးလို့ မရပါဘူး ခင်ဗျာ) ပန်းသီးရဲ့အစေ့မှာ Amygdalin လို့ ခေါ်တဲ့ […]
သစ္စာမရှိ ဖောက်ပြန်ထားသောသူများ ဘုရားပေါ်သို့ တက်လာလျှင် ချက်ချင်းမိုးတွေမှောင်လာပြီး မိုးကြိုးတွေပစ်ချတယ်ဆိုတဲ့ တန်ခိုးကြီးဘုရား
သစ္စာမရှိ ဖောက်ပြန်ထားသောသူများ ဘုရားပေါ်သို့ တက်လာလျှင် ချက်ချင်းမိုးတွေမှောင်လာပြီး မိုးကြိုးတွေပစ်ချတယ်ဆိုတဲ့ တန်ခိုးကြီးဘုရား ဖောက်ပြန်ထားသောသူများ၊ သစ္စာမရှိသူများ ဘုရားပေါ်သို့ တက်လာလျှင် ချက်ချင်းမိုးတွေမှောင်လာပြီး မိုးကြိုးတွေပစ်ချတယ်ဆိုတဲ့ တန်ခိုးကြီးဘုရား ပရိသတ်ကြီးရေ “ရှေးထုံးလည်းမပယ်နဲ့ ဈေးသုံးလည်းမလွယ်နဲ့” ဆိုတာ ကြားဖူးမှာပါနော်…ဒီစကားအလကားထားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသ သွားသွား သက်ဆိုင်ရာဒေသတွေမှာ ချမှတ်ထားတဲ့ အယူ စည်းကမ်းတွေကို […]
တိုင်းမှုးဇနီးဆိုသူက လက်မခံဘဲ ကားဒရိုင်ဘာကိုသာကိုယ်အပူချိန်တိုင်းစေခဲ့
တိုင်းမှုးဇနီးဆိုသူက လက်မခံဘဲ ကားဒရိုင်ဘာကိုသာကိုယ်အပူချိန်တိုင်းစေခဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကေအန်ယူနှင့် တပ်မတော် တင်းမာမှုဖြစ် မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံခရိုင်ရှိ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (ကေအန်ယူ) တပ်မဟာ ၁ ရဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ကြိုတင်ကာကွယ် စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို ဖယ်ရှားပေးဖို့ တပ်မတော်ဘက်က အင်အားနဲ့ လာရောက်တားမြစ်ရာမှာ နှစ်ဖက်တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး […]
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ပိုအားကောင်းလာ၊ ၇၂ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ် ရောက်နိုင်
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ပိုအားကောင်းလာ၊ ၇၂ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ် ရောက်နိုင် ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့ တောင်ပိုင်းတို့မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းဟာ ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး နောက် ၇၂ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ် ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ မိုးဇလက ဒီနေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီမှာ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ မေ ၃ […]
လူသေကို အသက်သွင်းကြသူများနှင့် သေရွာပြန် ဦးလေးကြီး
လူသေကို အသက်သွင်းကြသူများနှင့် သေရွာပြန် ဦးလေးကြီး အချိန်ကား ည တစ်နာရီ စကားပြောရင်းပင် ဦးလေးကြီး မောကြပ်လာသည်။ နဂိုရောဂါအခံ ကျောက်ကပ်မကောင်း သွေးတိုးဆီးချို နှလုံး သွေးကြောကျဉ်းများ လည်း ဆေးရုံမှာ သေချာပြန်မပြဖြစ်တာကြာပြီ နီးစပ်ရာဆေးခန်းမှာပဲ အဆင်ပြေသလို ကုလိုက် နေလိုက်နဲ့။ အခုတော့ မောရင်းမောရင်း ပိုမေါလာပြီ […]
ကွမ်းသီးပွဲရုံက သိန်း(၁၀၀)အပြင် နောက်ထပ်ကံထူးရှင်တွေ ထပ်မံထွက်ပေါ်
ကွမ်းသီးပွဲရုံက သိန်း(၁၀၀)အပြင် နောက်ထပ်ကံထူးရှင်တွေ ထပ်မံထွက်ပေါ် မော်လမြိုင် စမ်းကြီးရပ် နေဝင်းသူ(NWT) ကွမ်းသီးပွဲရုံက သိန်း(၁၀၀)အပြင် နောက်ထပ်ကံထူးရှင်တွေ ထပ်မံထွက်ပေါ်။၅ သောင်းဆု(၂)ဆု ထပ်ပေါက်။ ကံထူးရှင်က မထက်နန္ဒာ တဲ့။ ထီထိုးနိုင်ဖို့ အကြွေးစနစ်နဲ့ လုပ်ပေးတဲ့ အလုပ်ရှင်လဲ ဝမ်းသာအလုပ်သမတွေလဲ ဝမ်းသာရတာပေါ့။ထီအကြွေးစနစ်နဲ့ ထိုးရာမှ သိန်း(၁၀၀) ပေါက်သည့် […]
ကိုဗစ်-၁၉ အရေးပေါ်လူနာများကို REMDESIVIR ဆေးဖြင့်ကုသရန် အမေရိကန် FDA အတည်ပြု
ကိုဗစ်-၁၉ အရေးပေါ်လူနာများကို REMDESIVIR ဆေးဖြင့်ကုသရန် အမေရိကန် FDA အတည်ပြု အမေရိကန် အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးအဖွဲ့ FDA ဟာ ကိုဗစ်-၁၉ လူနာတွေကို ကုသဖို့ Gilead Sciences ကုမ္ပဏီရဲ့ Remdesivir ဆေးကို အတည်ပြုချက်ပေးလိုက်တယ်လို့ သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်က မေ ၁ ရက်နေ့မှာ […]
ထီဖွင့်ပွဲ ဒုတိယနေ့ ဆုမဲများ
ထီဖွင့်ပွဲ ဒုတိယနေ့ ဆုမဲများ ကျပ် (၁၀) သိန်းဆု (၁၆) ဆု ၁၀ သိန်း ဎ ၉၈၄၁၉၈. ၁၀ သိန်း ဈ ၄၈၂၉၆၃. ၁၀ သိန်း ရ ၃၈၆၄၇၉ ၁၀ သိန်း ဌ ၉၆၆၀၃၄ ၁၀ […]